Kwakakurudzira Prefab Industrial Structure Simbi Warehouse Mugadziri - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Kwakakurudzira Prefab Industrial Structure Simbi Warehouse Mugadziri
Kwakakurudzira Prefab Prefabricated Structure Simbi Warehouse ine Huru Span Yakagadzirwa muChina
Steel Zvivako Muratidze:
1.light uremu, mukuru simba, guru span;
2.short kuvaka nguva, mari yakaderera;
3.easy kufamba, bikurudza, zvakatipoteredza;
4. yakashandiswa nevakawanda, yaishandiswa fekitari / chirimwa / workshop, yokuchengetera zvinhu, chemahofisi, ndege hanga nezvimwewo;
5.structural mukurumari, nyore yokuzvigadzirisa.
prefab simbi mamiriro matanda ekuchengetera imba yekuchengetera muIsrael
Main Simbi Furemu
Q235B, Q345B: H chimiro, Box, Steel mutopota, Hot akakungurutsa papepa
Q235B, Q345B: H chimiro, Steel Truss, Hot akakungurutsa papepa
Q235B, Q345B: Steel tsvimbo, Steel mutopota, Angle simbi
C kana Z chimiro, Steel purlin
Q235B, Q346B: C kana Z chimiro, Steel purlin
Single mavara corrugate simbi jira, Sandwich Panel pamwe EPS, Rock shinda, PU, ​​Glass shinda nezvimwewo,
Munhuwo, High simba
munoyerera mvura yetsvina
Kwakakurudzira Steel ndiro, Stainless simbi
Aluminum chiwanikwa-Glass, Aluminum chiwanikwa-shutter, PVC
Zvishoma nezvishoma mumatope kana rinopfungaira musuo
PVC mutopota, Color simbi nyere
Zvakagadzirwa ruvara simbi papepa ukobvu 0.5mm
Crane mumatani 5 matani 20
Raw Zvinyorwa uye Simbi Sisitimu Maitiro:
1. Gadzirira mbishi zvinhu: cheka simbi ndiro kana kushandisa internation saizi H chikamu simbi uye kona kona simbi, kutenderera chubhu, kutenderera simbi, mativi chubhu etc.
2. Gungano uye Welding: ma welders edu anoteedzera madhirowa ekuunganidza nhengo dzesimbi uye kudziwisira pamwe chete sedanda / column / brace uye zvichingodaro
(Wedu wemuongorori anoongorora zvidimbu zvesimbi mushure mekupedzisa kupera, ino ndiyo yekutanga mhando cheki)
3. Sand blast: Mushure mekupedzisa (Yechipiri cheki yepamusoro cheki)
4. Paint: Mukati maawa maviri mushure mejecha kuputika, nhengo dzesimbi dzese dzinofanirwa kuve pendi. Mutengi anogona kusarudza chero ruvara uye chero mhando yepende. (Yechitatu cheki cheki)
5. Ongorora zvinhu nemutengi: Mushure mekupedza chikamu chekugadzira basa, tichakoka vatengi kuti vaongorore zvinhu tisati tarongedza furemu yesimbi.
6 .Kutakura uye kurodha: Kana vatengi vachida kuti isu titakure zvinhu nepedyo midziyo, isu tinorongedza simbi mamiriro enhengo imwe neimwe pane yesimbi skid uye kusunga yese yesimbi package zvakanaka.
( Yechina yemhando cheki) Main simbi furemu isina kurongedza mutoro mu40 'OT, denga uye madziro emadziro mutoro mu40' HQ.Or zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Isu tinopa vatengi imwe-yekumira yakasanganiswa edzimba edzimba inosanganisira kumisikidza uye kushanda.Engineers nevashandi vanogona kutumirwa kunze kwenyika kunongedzwa uye kumisikidzwa.
Sei Sarudza Qingdao Xinmao ZT Steel Kuvaka Co., Ltd.
1. Yakareba Nhoroondo uye Yakapfuma Chiitiko muSimbi Structure:
A. Makore 15 + Makambani Ekuziva
B. 600 zvirongwa + ruzivo pamba uye kunze.
C. Chigaro kutengeserana ukama munyika 20+:Pakistan, Sudan, Mozambique, Uzbekistan, Nigeria, Tobago, Abu Dhabi, Yemen, Jamaica, Ecuador, Qatar, Australia, India, Israel, Malaysia, Mauritius, Turkmenistan, etc.
2. Advanced Equipment uye Professional Production Line:
A. 50,000 sikweya mamita fekitari nharaunda
B. 600 + vakanyatsodzidziswa vashandi.
C. 100 + nyanzvi mainjiniya ne kugadzira uye kuvaka kugona,
D. 10 simbi mamiriro Kugadzirwa mitsetse .
E. 80+ anogadza makuru chaiwo uye muno yemhando kugadzira equipments.
A. 50000 matani Steel Structure Annual capacity: huru simbi yakarongeka 20000mts, yechipiri simbi 15000mts, siyana vafambi simbi jira 300000 sqm wepagore
B. $ 40000000 Annual Turnover
C. High Construction kunyatsoshanda, kukurukura nguva mukati memazuva 20 kusvika 30
A. ISO Certificate nokuti unhu, kwezvakatipoteredza, Occupational utano uye kuchengeteka
B. Steel Chivakwa Kuvaka Kosi Chitupa chechipiri.
C. SGS advertising
30% Yekubhadhara pasi uye iyo bhalansi Yakabhadharwa neT / T KANA L / C isati yatumirwa kana kutaurirana.
2. Delivery nguva?
Mazuva makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu mushure mekuparadzwa
3. Unogona kupa pamasikiro basa?
Hongu, tine vanopfuura 100 patani mainjiniya. Tinogona kugadzira zvizere mhinduro vanodhirowa sezvo paavhareji requirments yenyu.
4. Ko iwe taura akapesanisa kugadzwa panzvimbo mhiri kwemakungwa?
Chokwadi, tinogona kupa basa naro, cherechedzo uye kurovedza. Tinewo kwose akapesanisa chikwata chokugadza pamwe 60 vanhu.
Nhare: + 86-15621140557 (WeChat / WhatsApp)
A: Room 201, Building 32, Tian An cyber guta, Chengyang dunhu, Qingdao, China
Previous: Professional Design Steel azoshandiswa Factory rakateurwa Price
Next: Top Quality H chimiro Prefabricated Steel Structure Workshop
Dura redzimba Simbi
Easy gadza Prefabricated Steel Structure Basa ...
Akagadzira simbi mamiriro Mumusangano simbi stru ...
Prefab kwakakurudzira Steel Structure Constructi ...
Top Quality H chimiro Prefabricated Steel Structu ...
Simbi simbi chivakwa / workshop kubva kuChina
Qingdao China mwenje yakagadziriswa simbi simbi ...